Semalt: Nzira yekuti WordPress Plugins Work
Kugadzira WordPress plugin yako pachako hakusi kwakaoma, uye inokwanisa kugadzirisa zvinetso zvakasiyana zvewebsite yako. Kukopa, kuchinja uye kudarika zvinyorwa hazvina kukwana sezvaunenge uchifanira kunzwisisa kuti Shoko rePippp plugins rinoshanda sei uye kuti unovandudza sei mumabasa.php file. Plugin inzira yakachengeteka yokuita saiti yako.
Jason Adler, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , anovimbisa kuti zviri nyore kutanga ne WordPress yako plugins, uye iwe unogona kuziva kuti vanoshanda sei - dicke baumwolle kaufen. Wordpress plugins ndiyo PHP zvinyorwa kana nheyo dzinogona kuchinja shanduro yewebsite yako, kutarisa uye nguva yekutakura nguva. Vanopa basa rakakwana nezvikorekedzo, uye ndizvo zvinonzwisisika kuti Shoko rakadini WordPress plugins rinoshanda rinokosha kune blogger yose uye webmaster. Kungofanana nemitemo inodiwa kuwedzera kushanda uye kutarisa panzvimbo yako, WordPress plugins inowedzera kushanda kwemajiji enyu ewebhu.
1. FTP muwebsite yako
Chinhu chokutanga chaunofanira kunzwisisa ndechekuti FTP inoshanda sei, uye izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nehurongwa hwe FTP chaiyo, seCoda. Kana iwe usingazivi chinhu pamusoro peFTP, tinokurudzira kuti ukanganwe danho iri uye enda mberi kunhanho inotevera.
2. Enda kune WordPress yako plugin folder
Kana uchinge wawana mawebsite kuburikidza neFTP, danho rinotevera nderokuenda kune WordPress plugin folder. Iyi folda iri mu / wp-content / plugins chikamu uye iri nyore kuwana.
3. Dzai mahwendefa matsva e-plugin
Purogiramu imwe neimwe yaunogadzira, zvakakosha kusika faira yakasiyana. Izvi zviri nyore kusika, uye iwe unongoda kuenda kuShokoPress dashboard uye uise zita refaira yako. Hapana chikonzero chekuisa dashes, nzvimbo, mazwi kana mamwe mazwi akafanana ayo akaoma kufungidzira.
4. Gadzira iyo purogiramu yePPP yeSpanish WordPress plugin
Mudanho rinotevera, iwe unofanirwa kuumba faira huru, iyo inofanira kuva iyo PHP file mukati meWindowsPress yako folder folder. Iva nechokwadi chokuti wakapa zita rakakodzera kune iyi faira seyangu-chete-plugin.php. Kana wangozvitumidza, usakanganwa kuchinja faira uye chengetedza zvirongwa usati wavhara hwindo.
5. Kugadzirisa mashoko e plugin
Ikupedzisira uye imwe yezviito zvakakosha ndeyekukopa uye kudhonza mashoko ako epa plugin mukati mefaira guru. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe wakachengeta code inotevera kufaira uye wakachengetedza zvirongwa.
Zita re Plugin: My Only Plugin
Tsanangudzo: Ndiyo plugin yangu yekutanga ye WordPress, uye ndinofara kuigadzira.
Munyori: Zita rangu
Munyori URI: https://www.abc.mywebsite.com
Nhamba iyi ndiyo mhinduro ye PHP, iyo isingazooneki zvakananga muShoko rako 'admin section. Zvisinei, WordPress inoshandisa iyi code uye data yakakosha kuti ibudise zita repurogi yako uye ikubatsire kuwana rubatsiro kubva kune mamwe mapaji zvakare. Iwe unofanirwa kunzwisisa zvakakwana ruzivo uye unyeuke chirevo chepamusoro chakataurwa pamusoro apa kana uchida kuziva kuti Shoko rePippp plugins rinoshanda sei uye kuita mabasa avo akawanda zuva nezuva.